डा. गोबिन्द केसीलाई सास फेर्न गाह्रो…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
डा. गोबिन्द केसीलाई सास फेर्न गाह्रो…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग गर्दै २१ दिनदेखि ‘ डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटि’ल बनेको छ । चिकित्सकहरूले आईसी’यूमा भर्ना हुन आ’ग्रह गरे पनि उनले अस्वी’कार गरेका छन् ।
उनलाई आइतबार दिउँसो ११ बजे सास फेर्न असजिलो भएपछि फेस मास्कको माध्यमबाट प्रतिमिनेट ४ देखि ६ लिटरसम्म अक्सिजन दिइएको छ । सास फेर्न गा’ह्रो भएको बेला एसपी ओ’टू (अ’क्सिजनको स्तर) घटेर ९०–९१ प्रतिशत भएपछि अक्सि’जन दिन थालिएको हो ।
सास फेर्न असजिलो हुने, अ’क्सिजन आवश्यक पर्ने र बेलाबेला मुटुको चालमा गडबडी हुने अवस्थालाई हेरेर आई’सीयूमा भर्ना हुन सल्लाह दिँदा भने डा केसीले अस्वीकार गरेको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य टोलीका संयोजक डा सुवासप्रसाद आचार्यले भने ।
कुनै पनि व्यक्तिको होस रहुन्जेल जतिसुकै राम्रो नियत भए पनि चिकित्सकले बलजफ्ती गर्न मिल्दैन । होस नभएको स्थितिमा मात्र आफ्नो नि’र्णय लिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
१९ औं स त्याग्र हमा रहेका डा केसीको बीचबीचमा मु’टुको तीव्र धड्क’न हुने समस्या देखिएको छ ।
छाती, मांस’पेशी दुख्ने र बाउँ’डिने, चक्क’र लाग्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि बढेका छन् । पछिल्लो रगत परीक्षणअनुसार ब्लड सुगर धेरै कम छ । सिरम इले’क्ट्रोलाइट्स (सो’डियम पोटा’सियम, म्या’ग्नेसियम, क्या’ल्सियम, फ’स्फोरस) कमी देखिएको छ ।
शरीरमा पोटासि’यम र म्याग्नेसि’यमको स्तर कम हुँदा मुटुको चालमा, सोडियम र क्याल्सियम कम भए मस्तिष्क’मा असर परी होस कम, छारे हुन सक्ने डा आचार्यले बताएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
Prevदिपाश्री निरौलाले मुन्द्रेको कमेडी क्ल्बबाट हटाइए लगत्तै यस्तो प्रतिक्रिया दिइन्…हेर्नुहोस् ।
Nextदाङलाई प्रदेश ५ को स्थानीय राजधानी बनाउनको लागि दुईतिहाइ बहुमतले दाङ कायम भएको घोषण…हेर्नुहोस् ।
ओलिलाई अब दुवै पदबाट वि दा गर्नुपर्छ ओली भनेको गो मन साँ प हो: मन्त्री पुन